“ဖီလင် ၂၉” - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Happy Birthday To Ba Ba U Tin Oo
Next: “အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံ” »
Myanmar Blog » Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese, Notes, shweDarling » “ဖီလင် ၂၉”
Miss Grand Myanmar 2015 – San Htate htar Linn
Photo credit to Miss Grand International
Oh, Japan, when will the craziness end? Apparently there’sagame show in
Min Oo and Khin Zarchi Kyaw to makeacomeback
Myanmar actor Min Oo and Myanmar actress Khin Zarchi Kyaw are planning
ဇာတ်တူသား စားတဲ့ အဆိုတော် အဖမ်းခံပြီ
ကဗျာဘွဲ့မှူး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုဖြင့် တိမ်းရှောင်နေရာမှ လာရောက် အဖမ်းခံခြင်း ***** အနုပညာ လောကသားများနှင့် ငွေကြေး အရှုပ်ရှင်း များစွာကိုမဖြေရှင်းပဲ လအတန်ကြာရှောင်တိမ်း နေသော ကဗျာဘွဲ့မှူးသည်မကြာသေးမှီရက်ပိုင်းက
သည်ကနေ့ဟာ ဖုန်းမော်သေတဲ့ ၂၉ နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်တယ်။ RIT ကျောင်းဝင်းထဲကို စစ်သားတွေ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့လို့ ဖုန်းမော်၊ စိုးနိုင်၊ မြင့်ဦးနဲ့ ကျောင်းသားတချို့သေနတ်ဒဏ်ရာရပြီး နှစ်ဦး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားတွေက မခံမရပ်နိုင်လို့ ဖုန်းမော်ကို အာဇာနည်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ ကိုယ်တို့အတန်းထဲက လူကြီးသားတစ်ယောက်က “သူ့ဘာသူ ဘုမသိဘမသိနဲ့ သေနတ်မှန်သေတဲ့သူကို အတင်းကြီး သူရဲကောင်းမြှောက်နေတယ်။” လို့ ပြောတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဆတ်ဆတ်ခါ နာကျည်းမိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဖုန်းမော်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ ကောင်းရာကောင်းကြောင်း မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးပဲ ထားပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသူ သူ့ကျောင်းဝင်းထဲ သူ့ကျောင်းသားအဆောင်မှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်နေတာ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ စစ်မြေပြင်လည်း မဟုတ်၊ စစ်ပွဲကာလလည်းမဟုတ်ပဲ၊ နေရင်းထိုင်ရင်း အသားလွတ်ကြီး သူများလာသတ်တာ ခံရတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်ပစ်လို့မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပဲ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကိုယ်တို့ကျောင်းသားတွေ အသည်းထဲမှာ စွဲနေအောင် မှတ်မိနေစေဖို့ ဖုန်းမော်ကို အာဇာနည်စာရင်းသွင်းတယ်။ ဖုန်းမော်သေဆုံးရတဲ့အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ ဦးနေဝင်းကိုယ်တိုင် နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီမို့ ဒီကိစ္စ တစ်နှစ်တစ်ခါ မီးထိုင်မရှို့သင့်ဘူးဆိုပေမယ့် အခုထက်ထိလည်း ဖုန်းမော်လို လက်မခံနိုင်စရာ သတ်ဖြတ်လုပ်ကြံမှုများနဲ့ ကြုံတွေ့နေရဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် အပနာဒတရား လက်ကိုင်ထားလျက် မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆသင့်ကြောင်း သတိပေးနေရတယ်။
ပူပူနွေးနွေး သွေးမြေကျထားတဲ့ အစွန်းအထင်းကတော့ လေဆိပ်မှာ ဦးကိုနီ အသတ်ခံရတဲ့အမှုပါပဲ။ ဦးကိုနီသေတာ သူတို့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး လို့ ငြင်းနိုင်ပေမယ့် သူတို့ဆီကထွက်တဲ့လူတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ အခကြေးငွေပေးခိုင်းစေတဲ့သူက သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိနေတာလည်း မငြင်းနိုင်ပြန်ဘူး။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကွင်းဆက်တရားခံကို အကာအကွယ်ပေးထားတာလည်း သူတို့နဲ့ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်ပါဘူးလို့ သင်္ကာကင်းအောင် မရှင်းနိုင်ပြန်ဘူး။ နယ်စပ်ကိုမပြေးပဲ နေပြည်တော်ကို ပြေးတာ သူ့အတွက် အဲသည်မှာ ကာကွယ်ပေးမယ့်သူရှိလို့ဆိုတာ လူတိုင်းသိနိုင်တယ်။ အခုထက်ထိ အမှုမှန် မပေါ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တို့မှာ Until proved otherwise သံသယတွေ စွပ်စွဲချက်တွေ အမြစ်တွယ်နေပြီ။ သံသယဆိုတာ ဆင်သေကိုဆိတ်ရေနဲ့ ဖုံးမရဘူး။ မုသားနဲ့ချေဖျက်လို့ မကျေဘူး။ အမှန်တရားနဲ့မှသာ ကျေပျက်တယ်။ ကုလားသေတာ လွမ်းလို့ပဲ မပြီးနိုင်ဘူး။ မင့်အဖေသေတုန်းကတောင် အဲ့လောက်လွမ်းရဲ့လားလို့ ကွယ်ရာမှာ စောင်းမြောင်းဆဲဆိုနေသူတွေ ရှိမှန်း သိပါတယ်။ ဖုန်းမော်နဲ့သိလို့ ဦးကိုနီနဲ့သိလို့ မဟုတ်ပဲ နှစ်ယောက်စလုံးကို တစ်ခါဘူးမျှ မမြင်ဖူး မသိဖူးပဲနဲ့ သူတို့သေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်လာမသတ်မချင်း ကိုယ်မသေမချင်းတော့ သည်လိုအဖြစ်ဆိုးတွေကို နောင်လာနောက်သားတွေ ကြားအောင်သိအောင် ဆက်ရေးနေဦးမှာပါပဲ။ ကိုပါကြီးသေတုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ခံရသူဘက်က ပြည်ဖုံးကားချလိုက်ရတာကလွဲလို့ တရားမျှတမှုဆိုတာကို ရှာမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့သည်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် “ထားလို့သာနေရတယ်။ သတ်လို့လည်း သေနိုင်တာပဲ။ ဘာမှ အထွန့်တက်ဖို့ မရှိဘူး။” လို့ လူကြီးလူငယ် ကျားမမရွေး ခေါင်းထဲကိုရိုက်သွင်းလာခဲ့တာ ကိုယ့်အဖိုးအဖွားမျိုးဆက်ကနေ ကိုယ့်သားသမီးအရွယ်အထိ မျိုးဆက်လေးဆက်တိုင်ခဲ့ပြီ။ အခုထက်ထိလည်း မှန်နေတုန်းပဲ မဟုတ်လား။ ဘာငြင်းစရာရှိသလဲ။
ကိုယ်သိချင်တာတစ်ခုကတော့ သေတဲ့သူတွေရှိခဲ့သလို သတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့တာ အမှန်ပဲ။ အဲသည်သတ်တဲ့သူတွေဟာ ငါသတ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ အထက်ကခိုင်းလို့သတ်ရတာ။ ငါ့တိုင်းပြည်အတွက် သတ်ရတာ။ ငါ့ဘာသာသာသနာအတွက် သတ်ရတာ အစရှိသဖြင့် လွှဲချစရာ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကို အကာအကွယ်ယူပြီး အသက်ထက်ဆုံး လိပ်ပြာလုံလုံ နေသွားနိုင်သလား ဆိုတာပါ။ သူတို့မှာလည်း သူတို့သားသမီး မိသားစုတွေ ရှိမှာပေါ့လေ။ ကိုယ့်သွေးသားထိတော့ စောစောကလို နှလုံးသွင်းနိုင်ကြသလား။ ဒီလိုလူတွေကို မငြင်းနိုင်လောက်မယ့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးပြီး နောက်ကွယ်ကစေခိုင်းလုပ်ကြံ ခလောက်ဆန်နေသူတွေကရော “ဒါ ငါ လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ဘာသူတို့ လုပ်ကြတာပဲ။ ငါနဲ့ ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့” ဆိုပြီး တစ်သက်လုံး စားဝင်အိပ်ပျော် နောင်တတရားကင်းကင်း ဘဝကူးနိုင်ကြသလားဆိုတာ သိပ်သိချင်ပါတယ်။ သိချင်မနေနဲ့ ဟိုကဖြင့် စည်းစိမ်တွေကြားပျော်ပါးလို့ မှတ်တောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဆိုလိုတာက ခိုင်းတဲ့သူရော ကိုယ်တိုင်သတ်တဲ့သူရော မေ့ပစ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်။ သေရတဲ့သူတွေဘက်ကတော့ ဘယ်မေ့နိုင်မှာလဲ။ ကိုယ်ကလည်း မမေ့နိုင်ပါဘူးလေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မေ့နေတဲ့သူတွေ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေ ပြန်သတိမရပဲ မနေနိုင်အောင် ထမင်းလုံးတစ္ဆေ ကူခြောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အနာရှိက စပ်ကြစေသားပေါ့။
“ချေးခြောက် ရေပြန်နှူးမနေနဲ့။ အခု မင်းတို့လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ လက်ထက်ရောက်ပြီပဲ။ မင်းတို့အစိုးရနဲ့ကျမှ မင်းတို့မလိုလားတဲ့ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုမျိုးမပါပဲ၊ ခေါ်ယူစစ်ဆေးဖမ်းဆီးခြင်းမပါပဲ ငြိမ်အောင်ဝပ်အောင် အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ဆုတောင်းကြ၊” လို့ အငေါ်တူးချင်တူးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲသည်အစိုးရကိုယ်တိုင်က သူ့ထဲသူ့လူကို အကာအကွယ်လည်း မပေးနိုင် တရားမျှတမှုလည်း ပြန်ရှာမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်တို့က ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လူတွေကို အသိဥာဏ်ပွင့်လင်းလာစေဖို့ နှိုးဆော်ရေးသားနေရဦးမှာပါပဲ။ ကိုနေဝင်းတောင် အုတ်ခဲတစ်လုံးနဲ့ အသက်စွန့်ဝံ့သေးရင် ကိုယ်တွေအနေနဲ့ ဘာကို ကြောက်နေရဦးမှာလဲ။ ပေါ်ခဲ့ပြီးသမျှ ညောင်မြစ်တွေထဲမှာ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်သိက္ခာကို အဖတ်ဆယ် ကယ်တင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သလား၊ စည်းသုံးတန်တားပြီး ခြေကျူးခြေဖြတ် လက်ကျူးလက်ဖြတ်မယ်လို့ မျက်ခြေဖြတ်ထားသလားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေထက် ဘယ်သူကမှ ပိုမသိနိုင်ပါဘူး။ အိပ်ပျော်အောင် အိပ်ကြပါ။ စားဝင်အောင်လည်း စားကြပါ။ နောင် ၂၉ နှစ်အကြာမှာ ဘယ်သူဘယ်နေရာရောက်နေသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။ (ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ၂၉ ရက် အသက်ဆက်ရှင်အောင် ဆုတောင်းမှပါလေ။)
တကယ်တမ်းကျတော့ သူတို့ဘက်ကသာ ကိုနီမရှိမှအေးမယ်။ ဆွေဝင်းကို ဖမ်းလိုက်မှအေးမယ်။ ဒီစာရေးတဲ့အကောင်ကို တရားစွဲလိုက်။ နဲ့ လူတစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်း ကြည့်နေမြင်နေတာပါ။ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ဒီကိစ္စတွေကို ဦးနေဝင်းလုပ်ခဲ့တာ၊ ဦးစောမောင် လုပ်ခဲ့တာ၊ ဦးသန်းရွှေလုပ်ခဲ့တာ၊ ဦးသိန်းစိန်လုပ်ခဲ့တာ။ စသည်ဖြင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်တပ်ပြီး မစွပ်စွဲပါဘူး။ သူတို့ဟာ တာဝန်ရှိသူတွေသာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် စေခိုင်းတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ ဘယ်သူမဆို အဲဒီနေရာရောက်ရင် သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ စံနစ်ကြောင့် ဒီအလုပ်မျိုးတွေ မဖြစ်မနေ လုပ်ကြရမှာပဲ။ လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကတော့ အဲသည်စံနစ်ကိုပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပါတယ်။ တော်တော်များများကတော့ ကိုယ့်ကို မေမေ့သား မဟုတ်လား။ အနီကြောင် မဟုတ်လား။ တမီခြုံမဟုတ်လား။ လို့ အမျိုးမျိုး တံဆိပ်တပ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်က အဲသည်ပါတီထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အကျွမ်းတဝင် မရှိပါဘူး။ အဝေးက မေတ္တာစိတ်နဲ့ ဝန်းရံအားပေးတာကလွဲရင် မေမေနဲ့ မျက်လုံးချင်းတောင် ဆုံမကြည့်ဖူးဘူး။ မဲပေးစဉ်ကာလကတည်းက ကိုယ့်သဘောထား အတိအလင်း ပြောခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ NLD ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် သြဇာရွက် ၇ ရွက်ပဲ။ ဖုတ်ထုတ်ဖို့ ယူသုံးရတာ။
ကိုယ်တို့ငယ်ငယ်က စုန်း ဖုတ် ကဝေ တစ္ဆေ မှင်စာတွေကို ယုံတယ်။ အဲသည်အထဲမှာ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုတာ အခုကလေးတွေ ကြားဖူးချင်မှ ကြားဖူးမယ်။ ဖုတ်ဆိုတာ ငတ်ပြတ်ပြီး စားရမဲ့မဲ့ သောက်ရမဲ့မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ တစ္ဆေအမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲ။ သေခါနီးလူမမာတွေ ကိုယ်ထဲကိုဝင်ပူးပြီး ဟိုဟာစားချင်တယ် သည်ဟာစားချင်တယ် ပူဆာတတ်တယ်။ လူမမာသေသွားတဲ့အခါမှာလည်း အလောင်းကောင်ထဲက မထွက်ပဲ အစားအသောက်တွေ ရှာကြံတောင်းစားတတ်တယ်။ အိမ်သားတွေများတွေ့ရင် အားကြီး ပလီပလာပြောတတ်သတဲ့။ သူ့ကို ပစ်မထားပါနဲ့နော်။ အားကိုးပါရစီဆိုပြီး လက်ကလေးကိုင်ထားပြီးမှ အထဲကနေ သွေးစုတ်ယူတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။ အိမ်သားတွေ အိပ်နေရင် မီးဖိုချောင်ထဲရှိသမျှ ဘာမှမကျန်အောင် လှန်လှောဖွေရှာ စားသောက်တတ်သတဲ့။ စားစရာမရှိရင် ကြွက်တွေ ကြောင်တွေကိုပါ အစိမ်းလိုက်ဖမ်းစားတတ်သမို့ ဖုတ်ရှိတဲ့အိမ်ဆို ကြွက်တစ်ကောင် ကြောင်တစ်မြီးမှကို မလာဘူးတဲ့။ “နင် အစားစားတာကလည်း ဖုတ်ဝင်လာသလိုပဲ။” လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။ ကြာလာတော့ အလောင်းကြီးက အနံ့ထွက်လာရင် အဲသည်ဖုတ်က ပလီပလာနဲ့ ပေါင်ဒါတွေ ဖြူးခိုင်း ရေမွှေးတွေဖြန်းခိုင်းနဲ့ ရသလောက်ဆက်နေတာပဲတဲ့။ အလောင်းကောင်က အသွေးအသားတွေလည်း သူပဲ ဆက်စားနေတာမို့ ဖုတ်ထွက်တဲ့တစ်နေ့ကျရင် အရိုးသာကျန်ရသတဲ့။ အဲသည်ဖုတ်ကို ထွက်စေချင်ရင် အိပ်ယာအောက်မှာ သြဇာရွက် ၇ ရွက်ကိုခင်း၊ သူစီးနေကျဘိနပ်ကို ပြောင်းပြန်ထောင်ပေးထားရင် “တောက်” အကြီးကြီးခေါက်ပြီး “နေနှင့်ဦးပေါ့ကွာ။” ဆို အသက်ထွက်သွားတော့သတဲ့။
ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး သည်လို မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလည်း ယုံတာပဲကိုး လို့ မပြောနဲ့။ အဲ့ဒါ ဆရာဝန်မဖြစ်ခင် ကလေးဘဝတုန်းက လူကြီးသူမတွေ ပြောကြဆိုကြတာ ကြားဖူးနားဝနဲ့မို့ ယုံတာ။ ကြောက်တာ။ ကြီးလာတော့ မယုံတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု သည်အသက်သည်အရွယ်ရောက်တော့ ပြန်ယုံလာတယ်။ ဖုတ်ဆိုတာ သူတို့ပြောသလို လူမမာတွေ လူသေတွေဆီ ဝင်လာတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်တို့တိုင်းပြည်မယ် ဖုတ်ဝင်သလို အရိုးကျအောင် အစိမ်းရောအကျက်ရောမချန် လှန်လှော လုယက်စားသောက်နေတဲ့သူတွေကို တွေ့တော့ ငယ်ငယ်ကကြားဖူးတဲ့ ဖုတ်ဝင်သလိုပဲဆိုတာ သူတို့ကို ပြောတာများလား လို့ တွေးမိပြန်တယ်။ မြင်နေတွေ့နေတာကတော့ ကိုယ်သိတဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကိုယ့်အိမ်သား ကိုယ့်သွေးသားပါပဲ။ ဒါပေသိ ဟိုဘက်က သည်ဘက် မျက်နှာလွှဲလိုက်ရင် အပ်ချလောင်း အကုန်လုံးပျောက်အောင် စားပလိုက်နိုင်လွန်းတော့ ဘုရား ဘုရား ဖုတ်များဝင်နေသလား လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ မသထာတာ မဟုတ်သော်ငြား မဟုတ်သော်ရှိ ဟုတ်သော်ရှိ၊ သြဇာရွက်ကလေးများ အိပ်ယာအောက် ထားအိပ်လိုက်ရင် သူတို့ ဘယ်လိုနေလေမလဲ လို့ စေ့ငုမိတယ်။ ဟုတ်များနေသလား မသိပေါင်ကွယ်။ အဲသည်သြဇာရွက်ကြောင့်ပဲ တက်ခေါက်ကြိမ်းဝါးနေသလား အောင့်မေ့မိတယ်။ ခုထက်ထိတော့ ထွက်မယ့်ပုံမရှိ၊ ကိုယ်တောင် အိမ်ပေါ်က ဆင်းပြေးရမယ့်အခြေအနေ။
အစိုးရသစ်တက်လာတာပဲ တစ်နှစ်ကျော်ကျော် ရှိနေပြီ။ အခုထက်ထိ ဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက် “အရင်အစိုးရကြောင့်” ချည့် အော်နေရတာ ရှက်တောင် ရှက်လာပြီ။ အော်ရမှာပေါ့။ အခုအစိုးရက ကိုယ့်စိတ်ထဲ ခုချိန်ထိ အစိုးကိုမရသေးဘူး။ လူပါးလည်း မဝသေးဘူး။ တကယ်တမ်းဖြင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ အခုအစိုးရရဲ့ တလွဲတချော် မတော်မတည့်တွေကို ရေးချင်လွန်းလွန်းလို့ အူကိုယားနေတာ။ ခက်တာက သူတို့ခမျာလည်း ပဒူအုံ ဖျာတက်ခင်းရသလို အောက်ကရွစိရွစိနဲ့ တက်လာတဲ့ ပဆစ်ပနီတွေ ရန်ကိုရှင်းနေရတာနဲ့ ဖင်ထိုင်လို့မှ မကျသေးဘူး။ ကိုယ့်အမေအသက်တောင် ကျားသနားလို့ နွားချမ်းသာနေတာ။ သူတို့ကာကွယ်နိုင်လို့ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ အရင်အစိုးရမင်းများခင်ဗျား။ ကျေးတော်မျိုး ကျွန်တော်မျိုးကြီး အခုအစိုးရကို ဆဲချင်လှပါပြီ။ ဆဲခွင့်ရအောင် ခြေမန်းကွင်းကလေးများ ဖြေလွှတ်တော်မူပါဦး။ အဘတို့ဆဲရင် အဘတို့ကို လူမုန်းနေပါ့မယ်။ ငမိုက်သားကြီးကိုယ်တိုင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဆဲပျစီတော့။ ဘဘာသာဘ စည်းစိမ်ခြံရံနဲ့ စံတော်မူပါ။ နတ်ထီးပျော်လိုကလည်း ပျော်တော်မူပါရော့ဖျာ့။ ဟောသည်ဘက်က ကမ္မဋ္ဌာန်းအရိုးခြောက်ကြီးကို သံယောဇဉ်ဖြတ်တော်မူပါ့။ ကိုယ့်ထိုက်ကိုယ့်ကံ ဖြစ်သမျှ ခံပါရစီတော့ ဘုန်းတော်သခင် နတ်မှူးရှင်ဖျား။ ကိုင်း ရွာစား။ ထွက်စည်တော် ယွန်းစေ။ “ တိုင်း ပြည် မြို့…. သာယာစေသား …. ။”